တရုတ် ၊ ရုရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများက နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ၊ ကာဇက်စတန်နိုင်ငံရှိ အခြေအနေတို့အပေါ် တယ်လီဖုန်း ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုပြုလုပ် - Xinhua News Agency
တရုတ် ၊ ရုရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများက နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ၊ ကာဇက်စတန်နိုင်ငံရှိ အခြေအနေတို့အပေါ် တယ်လီဖုန်း ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်
ပေကျင်း ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကော်စီဝင် နှင့် နိုင်ငံခြာရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိသည် ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Sergei Lavrov နှင့် ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တွင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး နှင့် ကာဇက်စတန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ အခြေအနေတို့အပေါ် တယ်လီဖုန်းပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ရုရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်၏ တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပြီး ပေကျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်မည့် ခရီးစဥ်သည်၂ နှစ်နီးပါးအတွင်း နှစ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံအကြီးအကဲများအကြား ပထမဆုံး လူချင်းတွေ့ဆုံခြင်း ဖြစ်ရုံသာမက ယခုနှစ် အစပိုင်းတွင် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွင် အဓိကဖြစ်ရပ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်ရိက ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် နှစ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံအကြီးအကဲများအကြား နွေဦးပွဲတော်အတွင်း တွေ့ဆုံခြင်း နှင့် ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အတွက် မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်တွေ့ဆုံခြင်းမှတဆင့် ပြီးပြည့်စုံသော အောင်မြင်မှု နှင့် အကျိုးများသော ရလဒ်များ သေချာစေရေးအတွက် ရုရှားနိုင်ငံနှင့်အတူ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကို ခိုင်မာအားကောင်းစေရန် အဆင်သင့်ရှိကြောင်း ဝမ်ရိက ပြောကြားခဲ့သည်။
ကာဇက်စတန်နိုင်ငံရှိ အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ သမ္မတ Kassym-Jomart Tokayev ထံသို့ နှုတ်အားဖြင့် သတင်းစကားပါးခဲ့ကြောင်း နှင့် ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ၌ “ အရောင်အသွေး တော်လှန်ပုန်ကန်ရေးများ” သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှု နှင့် ဆူပူအုံကြွမှု ဖြစ်ပေါ်စေရန် ပြင်ပအင်အားစုများက ကြိုးပမ်းမှုမှန်သမျှကို တရုတ်နိုင်ငံ၏ အခိုင်အမာဆန့်ကျင်မှုကို လူသိရှင်ကြား ဖော်ပြထားကြောင်း ဝမ်ရိက အလေးအနက် ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံဘက်က ကာဇက်စတန်နိုင်ငံသမ္မတ Tokayev ၏ နိုင်ငံအတွင်း အဓိကရုဏ်းများ၏ သဘောသဘာဝအပေါ် ချင့်ချိန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သဘောတူကြောင်း နှင့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော အကြမ်းဖက်အင်အားစုများအား တိုက်ဖျက်ရာ၌ ကာဇက်စတန်နိုင်ငံအား ကူညီရာတွင် စုပေါင်းလုံခြုံရေးစာချုပ်အဖွဲ့ (CSTO)အား ပံ့ပိုးခြင်း နှင့် ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို လေးစားခြင်း၏ အခြေခံအပေါ်တွင် ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ၌ တည်ငြိမ်မှု ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင် အပြုသဘောဆောင်သည့် အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှ ပါဝင်လျက်ရှိကြောင်း ဝမ်ရိက ပြောကြားခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်များ နှင့် ဗဟိုအာရှနိုင်ငံများ၏ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသော အိမ်နီးချင်းများ ဖြစ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့သည် ဗဟိုအာရှတွင် စစ်ပွဲ သို့မဟုတ် ပရမ်းပတာ ဖြစ်ပွားခြင်းမှ တားဆီးရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်ရိက ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Chinese, Russian FMs hold phone call on bilateral ties, situation in Kazakhstan
BEIJING, Jan. 10 (Xinhua) — Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi on Monday heldaphone conversation with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on bilateral ties and the situation in Kazakhstan.
Russian President Vladimir Putin’s visit to China and his attendance at the opening ceremony of the Beijing Winter Olympics will not only be the first in-person meeting between the two countries’ heads of state in nearly two years, but alsoamajor event in international relations at the start of this year, Wang said.
China is ready to strengthen coordination with Russia to ensure the complete success and fruitful results of the “get-together for the Winter Olympics” and “meeting in the Spring Festival” between the two countries’ heads of state, Wang said.
On the situation in Kazakhstan, Wang stressed that Chinese President Xi Jinping has sentaverbal message to Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev, publicly expressing China’s firm opposition to any attempt by external forces to provoke unrest and instigate “color revolutions” in Kazakhstan.
The Chinese side agrees with President Tokayev’s assessment on the nature of the riots in Kazakhstan, and supports the Collective Security Treaty Organization in assisting Kazakhstan in fighting violent terrorist forces and playingapositive role in restoring stability in Kazakhstan on the premise of respecting Kazakhstan’s sovereignty, Wang said.
China and Russia, as permanent members of the United Nations Security Council and friendly neighbors of Central Asian countries, must prevent chaos or war from erupting in Central Asia, Wang said. ■
Photo – Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi attends the meeting of the Advisory Council of the Belt and Road Forum for International Cooperation (BRF) 2021 via video link in Beijing, capital of China, Dec. 17, 2021. (Xinhua/Wang Ye)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် တစ်ရက်အတွင်း ထပ်တိုးသည့် ကိုဗစ်လူနာဦးရေ စံချိန်သစ်တင် မြင့်တက်ခဲ့